Kuphenywa ngokuwa kwebhuloho eJapan
Tokyo - Amaphoyisa aphenya ngokudilika kwebhuloho elibulale abantu abangu-9, aseshe amahhovisi enkampani eyenza ibhuloho ngenhloso yokubheka ukuthi abukho yini ubufakazi bokuba nobudedengu kwezokuphepha.
Amakhulu kakhonkolo abhidlikile ngeSonto ngaphakathi kweSasago Tunnel esentshonalanga yeTokyo, awela phezulu kwezimoto ezintathu ebezihamba khona. Le nhlekelele isidale babaningi abafuna kulungiswe ingqalasizinda esindala eJapan.
Leli bhuloho, likhulu kanti lihlanganisa iTokyo nezindawo ezimaphakathi neJapan, lavulwa ngo-1977 ngemuva kwempi yomhlaba.
I-Central Nippon Expressway Co, inkampani ephethwe nguhulumeni, ithi ayinawo amarekhodi akhombisa ukuthi leli bhuloho lake lalungiswa kusukela lakhiwa, kodwa isikhulu senkampani uSatoshi Noguchi uthe like lahlolwa ibhuloho ngoSepthemba kwangatholakala lutho olungahambi kahle.